THRIVE ဘ ၀ အေးခဲနေသောအစားအစာထုတ်ကုန်များတွင်သစ်သီးများပါဝင်သည်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, အသားများ, ပဲ, အစေ့, နို့ထွက်ပစ္စည်း, နှင့်ကျန်းမာသောအချိုရည်များနှင့်အစားအစာများပင်, သင်ဥသို့မဟုတ်နို့ကဲ့သို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများကုန်သွားတိုင်းအချိန်တိုင်းကုန်စုံစတိုးဆိုင်သို့သွားခြင်းကိုသက်သာစေသည်.
အေးခဲနေသောအခြောက်လှန်းထားသောအစားအစာများကိုယူအက်စ်တွင်ထုတ်လုပ်ပြီး Thrive Life မှထုပ်ပိုးသည်. THRIVE အစားအစာများသည်ကြာရှည်ခံသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသက်တမ်းရှိသည် 5-25 နှစ်ပေါင်း, အလွန်ကြီးစွာသောအရေးပေါ်အစားအစာသို့မဟုတ်ရှင်သန်မှုအစားအစာအောင်. အေးခဲနေသောခြောက်သွေ့သောအစားအစာများကိုပျက်စီးခြင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်မီးဖိုချောင်တွင်သိုလှောင်ခန်းတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်. ကြီးထွားလာနေသောစီးပွားရေးသို့မဟုတ်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအတွင်းငွေစုဆောင်းရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. Flash ခဲသောနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်, ရှင်သန်နေသောအစားအစာများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည် 99% အာဟာရ၏, အရောင်များ, နှင့် texture. နှင့်ငါတို့ထုတ်ကုန်များလည်းအံ့သြဖွယ်အရသာ! အစားအစာထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်သည့်အခါရေရှည်သိုလှောင်မှုနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသုံးပြုရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော.
သင်အရည်ပျော်မည်မဟုတ်ပါ, ရေနံချောင်း, သို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းအသားဖြတ်တောက်.
တဖန်သင်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားရှာမတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ် ဦး အပိုအရသာပေါင်ရှိပါတယ်! ရုံကိုက်ယူပါ!
သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်နည်းများတစ် ဦး များအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းလိုအပ်တဲ့အခါ, THRIVE ထုတ်ကုန်ကိုသာရွေး။ ရောနှောထည့်ပါ- သငျသညျလတ်ဆတ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလိုပဲ. သင်၏မီးဖိုချောင်တွင် THRIVE ကိုသိမ်းထားခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ရှိခြင်းနှင့်တူသည် အိမ်သုံးစတိုးဆိုင်, လုံးဝသင်မိသားစုချစ်သောအစားအစာနှင့်အတူကောငျးအလှနျ. ဒေသခံကုန်စုံစတိုးမှအလျင်အမြန်မပြေးခြင်းဖြင့်သင်ချွေတာခြင်းသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်သင်သုံးစွဲနိုင်သောတန်ဖိုးရှိအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်.
ယနေ့ ThriveLife မှအအေးခံအစားအစာများကိုစားပါ. သူတို့ဟာအရသာရှိပြီးကျန်းမာပါတယ်. သင်ဝယ်သောလမ်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်, နှင့်အစားအစာပြင်ဆင်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်ဆတ်ဆုံးကိုသာကမ္ဘာအနှံ့ရှာဖွေခဲ့သည်, အရည်အသွေးမြင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ. ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာများတွင် MSG မပါ ၀ င်ပါ. လယ်ယာကနေသင့်အိမ်သို့, အကောင်းဆုံးသောအစားအစာသိုလှောင်ခြင်းထုတ်ကုန်များကိုသင်ရရှိနေခြင်းကိုသင်သိသည်။ THRIVE ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်သည်.
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ THRIVE ကိုနေ့စဉ်မီနူးစီစဉ်ခြင်းအတွက်ဖန်တီးထားလို့ပဲ, သင်စားသောအစားအစာများကိုအရသာရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးပြီ! အခြားသိုမဟုတ်သိုလှောင်ထားသောသိုမဟုတ်သိုဝှက်ထားသည့်အခြားအစားအစာသိုလှောင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်မတူသည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်သူတို့၏လတ်ဆတ်မှုနှင့်အရသာကိုစစ်ဆေးရန်အကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်ခံခဲ့ရသည်. အစားအစာများနှင့်အတူ, အကြီးအရသာစံဖြစ်ပါတယ် - ခြွင်းချက်မဟုတ်.
အမှုဆောင်ကုန်ကျစရိတ်နှုန်းအနိမ့်နှင့်အတူ, သင်၏မိသားစုသည်၎င်းတို့ရထိုက်သောအစာအမျိုးမျိုးနှင့်အာဟာရများကိုရရှိမည်ဟုအာမခံထားစဉ်အစားအစာများ THRIVE သည်ငွေစုဆောင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်.
အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည့်ချက်ပြုတ်နည်းများကို THRIVE ၏သေတ္တာတိုင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသဖြင့်သင်ဝယ်ယူထားသောအစားအစာသိုလှောင်ခန်းကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမစဉ်းစားနိုင်တော့ပါ။. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့မိသားစုကိုအကောင်းဆုံးအရသာနဲ့အာဟာရကိုရရှိစေချင်လို့ပါ, ငါတို့ချက်ပြုတ်နည်းများအားလုံး THRIVE ထုတ်ကုန်များအတွက်အထူးတီထွင်ခဲ့ကြသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံဗူးများသည်သင်၏အစားအစာကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောပမာဏနှင့်အမျိုးမျိုးပါဝင်မှုရှိစေရန်သင့်အစာကိုအလွယ်တကူစုစည်းထားပေးသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ Food Rotation Systems နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုသောအခါ, ရှင်သန်နေသောအစားအစာများကိုအစဉ်မပြတ်လှည့်ပတ်သွားသည်, သင့်မိသားစုကိုအာမခံချက်ပေးခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သမျှလတ်ဆတ်သောအစားအစာကိုရရှိသည်.
THRIVE မှနယူး RUVI သောက်စရာများ
ရှင်သန်မှုဘဝကပိုမိုလွယ်ကူစေတော်မူပြီ (နှင့်အရသာရှိတဲ့) အေးခဲသောအမှုန့်များဖြင့်သင်၏သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရရှိရန်. Ruvi သည်အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်သည်, အားလုံးကြောင်းကျန်းမာဖိုင်ဘာနှင့်အခြားဘာမျှမအပါအဝငျ, သူတို့ရဲ့အထွတ်အထိပ်အာဟာရမှာကောက်ယူနှင့်သူတို့အားအာဟာရများနှင့်သမျှသောအရသာအတွက်သော့ခတ်ဖို့အအေးခဲ!
အေးခဲ refried ပဲ
နို့ထွက်ပစ္စည်း, သစ်သီးများ, နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
အေးခဲ parmesan ဒိန်ခဲအေးခဲ
monterey jack ကိုဒိန်ခဲဖျက်စီး
အခြောက် butternut squash အေးခဲ
အေးခဲ fuji ပန်းသီးအေးခဲ